IPhone Yangu Inoramba Yakavhara! Heino Iyo Chaiyo Kugadzirisa. - Iphone
zvinomera zvinochengeta nyoka
iphone haizo backup kune icloud
iphone yekuvandudza maapplication asiri kushanda
ndoita sei kuti iphone yangu iridze
sei kugadzirisa apuro mumhanzi
IPhone Yangu Inoramba Yakavhara! Heino Chaicho Kugadzirisa.
Yako iPhone iri kuvhara pasi zvisina kujairika uye hauna chokwadi nei. Kamwe kamwe, yako iPhone inongodzima isina kukupa yambiro. Muchikamu chino, ini ndichatsanangura nei yako iPhone ichiramba ichivhara uye ichikuratidza maitiro ekugadzirisa dambudziko iri zvakanaka !
Chimwe chezvikonzero zvakajairika nei yako iPhone ichiramba ichivhara ndeyekuti yakanamatira mutopu yekutangazve, ichigara ichivhara, ichidzokera kumashure, ichivhara zvekare, zvichingodaro. Nekuita yakaoma reset, isu tinogona kukwanisa kupaza yako iPhone kunze kweiyo chiuno.
Ini Ini Ndakaomesa Reset Yangu iPhone?
Maitiro ekuomesa resetting an iPhone anosiyana nemodeli:
iPhone 6s, SE, uye ekare mamodheru : Dhinda uye ubatisise bhatani remagetsi uye iyo Bhatani repamba panguva imwechete kusvikira iyo skrini yashanduka nhema uye iyo Apple logo inoonekwa. Bvisa mabhatani ese kana Apple logo yaonekwa pachiratidziro.
iPhone 7 & iPhone 7 Uyezve : Panguva imwe chete pinda uye ubatisise iyo vhoriyamu pasi bhatani uye bhatani remagetsi . Rega mabhatani ese ari maviri kana Apple logo ikaonekwa pachiratidziri.
iPhone 8, X, XS uye nyowani mamodheru : Kutanga, pinda uye buritsa iyo vhoriyamu kumusoro bhatani . Chechipiri, pinda uye buritsa iyo vhoriyamu pasi bhatani . Chekupedzisira, pinda uye bata bhatani repadivi kusvikira iyo skrini yashanduka nhema uye iyo Apple logo yaonekwa.
Iyo Bhatiri Inoda Kugadziriswa?
Ko yako iPhone inoramba ichivhara kunyange kana ichiti ine hupenyu hwebhatiri yasara? Zvinogoneka kuti yako iPhone's bhatiri muzana chiratidzo rave risiri iro uye risingavimbike!
Nguva yakawanda, izvi ndizvo zvinokonzerwa nedambudziko re software, kwete bhatiri rakanganisa! Iwe unogona kuverenga yedu imwe chinyorwa uine mamwe marondedzero akajeka nezvekuti nei yako iPhone inodzima kunyangwe iine hupenyu hwebhatiri , kana iwe unogona kuramba uchitevera matanho pazasi. Ese mairi zvinyorwa achakubatsira iwe kugadzirisa yakadzama software nyaya iyo inogona kunge ichikonzera iri dambudziko!
Gadziridza Yako iPhone KuIchangoburwa iOS
Apple inogara ichiburitsa shanduro nyowani dzeIOS, iyo iPhone inoshanda sisitimu, kugadzirisa zvinonetsa software uye nekuunza zvitsva. Iyo nyowani software yekugadzirisa inogona kugadzirisa chinetso chinetso che software chiri kuita kuti yako iPhone ivhare zvisingatarisirwi.
Tarisa uone iOS yekuvandudza nekuvhura Zvirongwa nekubaya General -> Software Kwidziridza . Tinya Dhawunirodha uye gadza kana nyowani software yekuvandudza iripo! Tarisa uone yedu imwe chinyorwa kana ukamhanyisa mune chero matambudziko kana uchigadzirisa yako iPhone .
Isa yako iPhone Mune DFU Mode
A DFU (mudziyo firmware update) kudzorera ndiyo yakadzika mhando iPhone kudzorera. Kana dambudziko re software riri kukonzera kuti iPhone yako irambe ichivhara, iyo DFU kudzorera ichagadzirisa dambudziko. Tarisa uone yedu DFU kudzorera chinyorwa kuti udzidze maitiro ekuisa yako iPhone muDFU modhi !
Kuongorora Yako iPhone Kugadzirisa Sarudzo
Kana yako iPhone ichiri kuvhara pasi zvisina kujairika mushure mekuti iwe wapedza DFU kudzoreredza, inguva yekuongorora ako ekugadzirisa sarudzo. Yangu yekutanga kurudziro ndeye kuenda kuApple Chitoro chako, kunyanya kana yako iPhone yakafukidzwa neAppleCare + chirongwa chekudzivirira.
Ita shuwa ku ronga musangano usati waenda kune yako Apple Store! Pasina musangano, iwe ungatofanira kushandisa yakawanda nguva kumira wakamira uye kumirira Apple tech kuti iwanikwe.
Ini ndinokurudzirawo masevhisi e Pulse , iri-inoda kambani yekugadzirisa nhare. Puls anogona kutumira tekinoroji kwauri mumaminitsi mashoma makumi matanhatu. Kugadziriswa kwepuls dzimwe nguva kunodhura pane iyo Apple Chitoro uye kunouya newaranti yeupenyu!
iphone yakanamatira paapuro logo isina kudzoreredza
Kuvhara Musuwo Pane Iri Dambudziko re iPhone
Iwe wakagadzirisa yako iPhone uye haichisiri kuvhara iyo yega. Ndinovimba muchagovana ichi chinyorwa pasocial media kudzidzisa shamwari dzako uye mhuri zvekuita kana yavo iPhone ikaramba ichivhara! Inzwa wakasununguka kusiya chero mamwe makomendi kana mibvunzo yauinayo pazasi - ndichaapindura nekukurumidza sezvandinogona!